I-China PP Meltblown Production Nonwoven Fabric Ukwenza Machine Production Line abakhiqizi nabaphakeli | I-Meiben
Inqubo yokwenziwa kwendwangu engalukanga
Ukucaciswa komugqa wokukhiqiza ongasuki
I-SS (Ububanzi obuvelisiwe) 1600mm 2400mm 3200mm
Izinsiza kusebenza 29x13x10m 30x14x10m 32x15x10m
Ijubane 350m / iminithi 350m / iminithi 30m / iminithi
I-Gram Weighht 10-150g / m2 10-150g / m2 10-150g / m2
Ukukhiqiza (Imikhiqizo ngokuya ngo-20g / M2) 9-10T / Izinsuku 13-14T / Izinsuku 18-19T / Izinsuku
INTO UBubanzi BOKUSEBENZA I-GSM UMPHUMELA WONYAKA ISIKHATHI SOKUSEBENZA
S 1600MM 8-200 1500T IDayimane, okusaqanda, isiphambano nomugqa
S 2400MM 8-200 2400T IDayimane, okusaqanda, isiphambano nomugqa
S 3200MM 8-200 3000T IDayimane, okusaqanda, isiphambano nomugqa
SS 1600MM 10-200 2500T IDayimane, okusaqanda, isiphambano nomugqa
SS 2400MM 10-200 3300T IDayimane, okusaqanda, isiphambano nomugqa
SS 3200MM 10-200 5000T IDayimane, okusaqanda, isiphambano nomugqa
I-SMS 1600MM 15-200 2750T Idayimane ne-oval
I-SMS 2400MM 15-200 3630T Idayimane ne-oval
I-SMS 3200MM 15-200 5500T Idayimane ne-oval
Isakhiwo sohlelo lomugqa wokukhiqiza
Ulayini wokukhiqiza wendwangu ongalukwanga we-spunbond uyinkimbinkimbi kakhulu kepha ihlakaniphile imishini yokulungisa imishini. Ngezansi, umhleli uzokukhombisa izingxenye ezimbili ezinkulu zomugqa wokukhiqiza ongavukiwe we-spunbond ngokuningiliziwe.
Uhlelo lokuhambisa: Olokuqala uhlelo lokudlulisa lukalayini wokukhiqiza ongasuki we-spunbond. Uhlelo lokudlulisa lubandakanya izinto ezimbili, shaft yokudlulisa yangaphakathi nezingxenye ezihlobene nayo, nebhande lokudlulisa elingaphandle. Ibhande lokudlulisa langaphandle lakhiwe kakhulu ngedivayisi yokuphakela, idivaysi yokudlulisa kanye nedivayisi yokugcina. Idivayisi ngayinye ihambelana nenqubo ehlukile yokukhiqizwa kwendwangu ye-spunbond non-woven. Umshini wonke uqhutshwa yi-shaft enkulu yangaphakathi yedrayivu, bese-ke ingafinyelela umphumela wokucutshungulwa kokuhanjiswa kwezinto okuphezulu kakhulu.
Isistimu yokulawula: Njengoba igama lisho, uhlelo lokulawula uhlelo olulawula ukusebenza kwalo lonke ulayini wokukhiqiza we-spunbond nonwoven. Isinciphisi ngaphakathi kukalayini wokukhiqiza ongasetshenziswanga we-spunbond siguqula amasiginali kagesi abe yizenzo zomshini, bese sisekela ukusebenza kwazo zonke izingxenye zokudluliswa komshini kulayini wokukhiqiza ongasetshenziswanga owenziwe ngesipuni. Ngasikhathi sinye, ulayini wokukhiqiza we-spunbond nonwoven futhi unomsebenzi wokuguqula wezindlela eziningi zokulawula, ngokwesibonelo, ungashintshwa phakathi kokuzenzekelayo, oku-semi-othomathikhi nokwenziwa ngesandla, ukuze kuhlangatshezwane nezidingo zokusebenza komugqa wokukhiqiza ongaphothiwe ophothiwe ngaphansi izidingo ezahlukene zokukhiqiza.
Lezi zingxenye ezimbili ezingenhla zakha umugqa wokukhiqiza wendwangu ongavukiwe ohlanganisa i-spunbond, enikeza isiqinisekiso esinamandla nesinokwethenjelwa sehardware sokukhiqizwa kwezindwangu ezingalukiwe eziphothiwe. Ngokuthuthuka okuqhubekayo kobuchwepheshe bokukhiqiza, izintambo eziningi zokukhiqiza ezingavukiwe ze-spunbond seziqale ukwehlisa amanani futhi zaziwa, futhi abakhiqizi abaningi sebeqalile ukubazisa. Isethi yonke yemishini enikezwe ngumkhiqizi wolayini wethu wokukhiqiza ongasuki we-spunbond ungokuqukethwe okuphezulu kwezobuchwepheshe, intengo yesayensi, nekhwalithi enhle kakhulu, ezoqinisekisa ukuthi uzokwaneliseka ngokusebenzisa kwakho. Uma unesifiso semishini yethu, sicela ukhululeke ukuvakashela imboni yethu.
Langaphambilini 1600mm Melt-Blown Indwangu Ukwenza Machine PP Nonwoven Machine Production Line
Olandelayo: Spunmelt esiyinhlanganisela umugqa ukukhiqizwa nonwoven, spunbonded umugqa ukukhiqizwa nonwoven
Okuzenzakalelayo bfe 99 kk meltblown indwangu nonwoven P ...
Non-nokwelukiweyo Indwangu ukukhiqizwa umugqa China polyprop ...
SMS PP Melt-kushaywa Nonwoven Indwangu Production Li ...
1600mm Melt-Blown Indwangu Ukwenza Machine PP Nonw ...
Kuhle Inani SMS Kuhlinzwa SMS Nonwoven Indwangu mac ...
Spunmelt esiyinhlanganisela umugqa ukukhiqizwa nonwoven, sp ...